Izvo Zvaunoda Kuti Uzive Nezve Australia Labradoodle - Inobereka
Izvo Zvaunoda Kuti Uzive Nezve Australia Labradoodle
Kune imwe mhando yekugadzira mudhorobha iyo yakakodzera iyo hype - yeAustralia Labradoodle!
Asi iine ma doodle akawanda kunze kwenyika ye canine, vanoda imbwa vanofanirwa kuziva zvemhando dzakasiyana! Saka usati wawedzera Labradoodle yeAustralia sechikamu chemhuri yako, tora nguva yekudzidza nezvavo.
Ramba uchiverenga gwara redu kuti uzive kana iri iri musanganiswa wakakodzera iwe.
Kwayakatangira: Iyo yeAustralia Labradoodle Nhoroondo
Chii chinonzi Labradoodle yeAustralia Inotaridzika?
Hunhu uye Hunhu hweAustralia Labradoodle
Maitiro Ekutarisira Iyo yeAustralia Labradoodle
Ko Labradoodle yeAustralia Imbwa Ine Hutano?
Ndekupi Kwandinogona Kutenga kana Kupakata An Australian Labradoodle?
Akasarudzika Makirabhu Akatarisana neAustralia Labradoodles
Kuenzanisa iyo Labradoodle yeAustralia nemamwe maDoodle
Nei Ndichifanira Kutenga YeAustralia Labradoodle?
Zviri nyore kutaura kuti iyo Aussie Labradoodle yakafanana neiyo Yakajairwa Labradoodle . Kuti mutsauko chete ndiwe wawakawedzera iyo nzvimbo yawakabva. Asi hazvisi nyore.
Ndosaka tichazochera zvakadzama pane izvo mhando dzinoumba ino cutie!
Izvo zvese zvakatanga muna 1989 apo mukadzi ari bofu aida imbwa yebasa. Dambudziko nderekuti, murume wake haagadziriswe imbwa.
Wally Conron , iyo Kuchengeta Maneja weGwara Imbwa Services muAustralia, akatanga kushanda mukugadzira canine ine iyo hunhu hwakakwana hwembwa yebasa uye a hypoallergenic jasi.
Akasanganisa imbwa mbiri dzakachena dzinoenderana nerondedzero. Akasarudza anoshanda nesimba Labrador retriever uye isina-kudurura Standard Poodle . Saka izita Labrador-Poodle kana Labradoodle .
Mushure meizvozvo kubudirira, Wally Conron aida kusimudzira rudzi rwacho mberi.
Australia Tegan Park uye Rutland Manor akabatsirwa nekuenderera zvakatanga naWally. Vakaramba vachichengeta Labradoodles kuti vagadzire imbwa dzine dzinowirirana jasi mhando, hunhu, uye kuumbika.
Kuti isu tinzwisise kuti vagadziri vakakwanisa sei kuumba hunhu hwakaenzana hwerudzi urwu, isu taizoda kukurukura nezvekuti Australian Labradoodle yakaitwa sei.
Chii Chinoita Kuti Australian Labradoodle?
Labradoodle yeAustralia inogona kusarudzwa seizvi kana paine chero mamiriro maviri akasangana:
Iko kubereka kweLabradoodle kwakasvika kune yechishanu Chizvarwa
Imbwa yemadzitateguru ine Labrador, Poodle, uye American Cocker Spaniel
Kusiyana nedzimwe nzira dzekuyambuka dzine vabereki vaviri vakachena, iyo Aussie Labradoodle inogona kuve nemhando nhatu, kana kuve mugumisiro wekuramba uchiberekana weLabradoodles.
Kuramba uchibereka zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuyambuka maLabradoodles maviri ayo maviri ane vabereki veLabradoodle futi. Kana iyo imbwa dzavakaburitsa dzakwana zvakakwana, ita izvozvo kashanu (zvizvarwa zvishanu), uye iwe unowana iyo Australia Labradoodle , kuwanda kwemarudzi akasiyana-siyana. Ndiwo maratidziro avakaita rudzi urwu.
Uye kana iwe uchifunga kuti kwakakwana kuberekana kuita iyi inoshamisa imbwa, masangano anovandudza Australian Labradoodle haana kumira ipapo. Ivo vaiziva kuti ivo vanogona kuwana akawanda akanaka maitiro mukati merudzi kuti riite rakakwana!
Kuti vaite izvozvo, ivo zvakanyatso wedzera mamwe marudzi mumitsara yeLabradoodle yaizoita kuunza hunhu hunodiwa , uye imbwa idzo ndidzo:
Irish Mvura Spaniel
Chirungu Cocker Spaniel
Vawedzere ivo kumusoro, kusanganisira iyo Labrador nePoodle, ipapo iyo Aussie Labradoodle inayo huwandu hunokwana hutatu hwezvibereko zvevabereki .
Ese mazera evabereki aive nechimwe chinhu chekuuya nacho patafura, asi iyo inonyanya kusanganiswa yaishandiswa kugadzira Australian Labradoodle ndiyo Poodle, Labrador Retriever, uye American Cocker Spaniel.
Vagadziri verudzi urwu vaigara vachishandisa iyo American Cocker Spaniel nekuti ndiyo yaive imbwa yekupedzisira yavakawedzera kuAustralia Labradoodle, uye vakaona kuti inounza hunhu hwakaenzana kupfuura dzimwe imbwa.
Saka ngatinyurirei mukati uye tikurukure zvinowirirana hunhu hweiyi yakanaka Doodle.
Icho chirevo chakajairika icho zvinotarisa hazvisi zvese , asi sezvo isu tiri kuzendamira kuchokwadi chekuti maAustralia Labradoodles akangofanana, iwo maratidziro achapedzisa yako yekutarisa.
Ivo vakaita semhuka dzakashongedzwa dzakanaka hombe uye yakatenderera, akasviba maziso izvo zvinoita kuti iwe udanane! Mamwe acho anotova nemaziso eziso ayo aigona kubva kune amber erima kusvika kumeso akacheneruka-akasvibira maziso. Uye vane muhombe, wakaita kunge mativi mhino .
Rudzi rwemhino rweAustralia rweLabradoodle runogona kuve dema, rakatsvuka-ruvara, kana rakatsvukuruka / pingi, asi zvaizosiyana zvichienderana neruvara rwejasi ravo.
Aussie Labradoodles vane mativi akaenzana, akaenzana , uye ine muswe unoteera musoro wepamusoro kana uchifamba asi haufanire kunyura kumusana.
Yakakura Zvakadii YeAustralia Labradoodle?
Hazvina mhosva kuti iwe unogara kupi uye yakakura sei kana diki nzvimbo yako, uri muhombe! Kubva Poodle mubereki inouya nematanhatu matatu , ndozvinoitawo Aussie Labradoodle. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutora!
Yakakura-saizi Australia Labradoodles anenge 21 kusvika 24 inches inches (53 kusvika 61 cm) uye anogona kuyera akakomberedza 45 kusvika 77 mapaundi (20 kusvika 35 kg).
Pakati Australia Labradoodles ane 17 kusvika 20 inches kureba (43 kusvika 51 cm) uye anogona kuyera akakomberedza 30 kusvika 45 pounds (14 kusvika 20 kg).
Miniature ndivo chete akacheka! Iwo anongori 14 kusvika 16 inches inches (36 kusvika 41 cm) uye anorema angangoita anenge 15 kusvika 30 makirogiramu (7 kusvika 14 kg).
Unofanira kuchengeta mupfungwa varume kazhinji yakakura kudarika imbwa hadzi . Asi pakuenzanisa zvirinani, heino chati inoratidza kukura kweAustralia Labradoodle kana yakura zvizere:
SIZE CHAT Kureba Kurema
Yakajairwa Australian Labradoodle
21 kusvika 24 inches
(53 kusvika 61 cm)
45 kusvika ku77 mapaundi
(20 kusvika 35 kg)
Pakati Pakati peAustralia Labradoodle
17 kusvika 20 inches
(43 kusvika 51 cm)
30 kusvika ku45 mapaundi
(14 kusvika 20 kg)
Chidiki cheAustralia Labradoodle
14 kusvika 16 inches
(36 kusvika 41 cm)
15 kusvika ku30 mapaundi
(7 kusvika 14 kg)
Sezvo zviripo mumatanhatu matatu, an furati kana a kumba neyadhi yepakati-saizi zvingave zvakakwana uye zvakakodzera kuita kuti imbwa iyi ifare. Izvo zvakakosha ndezvekuti ivo vanowana yavo yezuva nezuva muyero wemuviri uye wepfungwa kurovedza muviri.
YeAustralia Labradoodle Coat Uye Ruvara
Isu tinoziva kuti ichi fluffy pooch inoita kunge akakwana kukwikwidzana shamwari shamwari, asi iwe unoziva here kuti ine mhando nhatu dzakasiyana dzejasi ?
Nemvere-textured: Idzi dzakapfava siriki uye dzinogona kutangira kubva padhuze yakatwasuka kana yakavhurika dehwe kune wavy.
Mvere dzemakwai: Zvakafanana nemvere dzemakwai uye ine donje-senge kunzwa kune iyo bata. Zvakafanana nePoodle asi ine yakasununguka inotenderera iyo inovhura zviri nyore kune ganda.
Bvudzi-jasi mhando: Kunyangwe yakatwasuka kana kuti yakamonyoroka zvishoma, vhudzi-rerudzi rwakakora kumanzwiro uye rinogona kunge riine hwema hwedzidziso. Kunyangwe iwe uchida yako Doodle kuve-ipfupi-bvudzi kana refu-vhudzi, iyi mhando ipasi yekuchengetedza jasi uye ine akasiyana madosi ekuteura.
Aussie Labradoodles anouyawo mu akasiyana siyana mavara , senge parti, chena, apurikoti, chokoreti, nhema, merle, nezvimwe!
Kana iwe ukafunga kutora yeAustralia Labradoodle mbwanana, usashamiswe kana yake jasi jira shanduko. Kunogona kusviba kana kupera sezvaanokura.
Kuchenesa iyo Aussie Labradoodle's Hypoallergenic Coat
Hazvina mhosva kuti rudzii rwejasi rako reAustralia Labradoodle rine, zvibvunze pakutanga kuti: ' Nderudzii rwechitarisiko chandinoda imbwa yangu kuva nayo? 'Uye' Inguva yakareba sei ini ndinoda kuti jasi rake rive? '.
Sezvo bhachi reAustralia Labradoodle rave richienderera mberi rakagadzirwa pamusoro pemakore makumi matatu nematatu apfuura, ivo vari kure kure nekuwana iyo yekudonha hunhu yeRabrador.
Asi kunyangwe hazvo vari rudzi rusina kudurura, ivo vachiri kuda kushambidzika nguva dzose.
Unogona kukwesha bhachi rako reDoodle kaviri pavhiki kudzivirira kukakavara, pamwe nekuchengeta hura hwake hwakanaka uye hwakachena. Kana imbwa yako iri mukati meimba, uchikwesha mazuva ese mashoma uye imwe nguva kugeza zvingave zvakakwana.
Zvikamu zvekushongedza zvinogona zvakare kureva nguva yekubatanidza iwe nembwa yako, asi kana iwe uchiziva iwe kuti unoda rubatsiro rwehunyanzvi, yeuka ku enda naye kugroomer mwedzi miviri kusvika mitatu yose kuchengetedza nyore-kugadzirisa-jasi.
Ingoitira kuti iwe urikushamisika, iyo shaggy kutaridzika ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa bvudzi kana kutsvaga kweAustralia Labradoodles.
Tichiri panyaya yekushambidzika, usakanganwa kucheka nzara dzeAustralia dzeLabradoodle dzese vhiki mbiri kusvika ina nekukwesha rake mazino pamwedzi . Kune nzeve, ita cheki pamwedzi uye bvisa bvudzi remukati nguva dzose kudzivirira hutachiona nekuda kwekushayikwa kwemhepo inoyerera.
Heino vhidhiyo inoratidza yakakosha yekuraira yekuraira kweAustralia Labradoodles neAFA:
Maoko pasi, imbwa dzese dzinonakidza! Asi iwe waiziva here kuti Chekutanga Chizvarwa Labradoodle inowanzo kuve yakanyanyisa kushanda? Australia Labradoodles vari kure nazvo. Vari dzikama , zvine mwero , nzwisisa , uye vakura . Asi ivo vachiri zvinonakidza kwazvo kuva padhuze naye, ingave zvemukati kana zvekunze kutamba!
Iko zvakare kune chikonzero nei iwe uchinzwa nekuverenga zvakawanda zvakanaka zvinhu nezve rudzi urwu, uye imhaka yehunhu hwakanaka hwayakawana kubva kuvabereki vayo.
Kufanana nePoodle, maAustralia Labradoodles ari ane hungwaru, akachangamuka, uye ane hushamwari . Ivo mufaro kuva navo nekuti vanogona kuve vakanaka zvinosetsa dzimwe nguva!
Rudzi urwu rwaizove zvakare zvakanaka kumhuri nevana. Ingo ita chokwadi chekutarisa vana vako vadiki pese pavanenge vakatenderedza mbwanana kana yako Mini Australia Labradoodle kudzivirira kukuvara.
Kunze kweizvozvo, Aussie Labradoodles ari akavimbika , yakanaka nedzimwe imbwa uye mhuka dzinovaraidza , vasingatyi kuratidza rudo rwavo uye kuzvipira, uye vari mutungamiriri mukuru uye imbwa dzekurapa - kungofanana nevabereki vavo veLabrador Retriever neSpaniel.
Nezvose zvavanogona kupa, unoratidza sei imbwa yako kuti unovada? Nekutarisirwa kwakakodzera, hongu!
Yakawanda Sei Exercise Inoitwa neAustralia Labradoodle Inoda
Kunyangwe hazvo rudzi urwu rwakakodzera kumarudzi ese epamba, imbwa yako ichiri kuda kurovedza muviri kuti isunungure pent kumusoro simba kubva kune ese iwo nguva anoshandiswa mumba.
Kana yako Aussie Labradoodle ikabhowekana, isingadiwe hunhu inogona kukura. Izvo iwe zvaunoda kuti uite kumuchengeta iye achifara nekumupa akawanda ezuva nezuva epfungwa uye epanyama zviitiko.
Labradoodle yeAustralia ine mwero wepasi-kusvika-pakati simba, saka a 30 kusvika 40-mineti kufamba zuva kunenge kwaringana.
Kunze kwekufamba-famba, iwe unogona zvakare kutora imbwa yako kuti iende kumhanya, kumhanya, kukwira makomo, kana, kana iri iyo hobby yako, kunyange kuvhima! Australia Labradoodles anoda mvura , zvakare. Kana iwe uine dziva, kana iwe uchigara padyo nedziva kana pamhenderekedzo yegungwa, uya naye, uye iwe waizomuona achidonhera mukati kuzopwanya nekushambira.
Kana iwe usina nguva yekuendesa imbwa yako kunze kwekufamba, kumashure kwakakomberedzwa inzvimbo huru yekutamba kutora naye. Uyu mutambo unoshanda unogona kuzadza zviri nyore maminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu ehuwandu hunodiwa hwekurovedza muviri weAussie Labradoodle.
Kunze kwezviitiko zvemuviri, yako Doodle yaizodawo kukurudzira kwepfungwa. Saka uchimupa varaidzo yemukati senge kutsenga, kupenda, kana kukweva matoyi zvinomupokana nenjere.
Zvimwe zvezvigadzirwa zvinozivikanwa zverudzi urwu ndeizvi Kong Kunyanyisa uye Kunze Hound Nina Ottoson Imbwa Brick Bata Rakajeka Imbwa Toy . Kupa yako Aussie Labradoodle sarudzo dzinoverengeka kwaizoita kuti arege kufinhwa, uye zvaizoita kuti pfungwa dzake dzisatsenge fenicha kana shangu dzako.
Kudzidzisa yeAustralia Labradoodle
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezve ino canine ndechekuti ivo vari smart uye nyore kudzidzisa . Ivo vanogona kutora yako mitemo uye iwo manomano aunomudzidzisa iye mune ingori pfupi nguva.
Yambiro! Kubva panguva yaunounza yako yeAustralia Labradoodle mbwanana kumba, simudzira iwe semutungamiri wepakiti yeimba kana yemhuri. Rudzi urwu runogona kukunyengera nekukudziridza hunhu husina kunaka dai asina kurerwa, kushamwaridzana, uye kudzidziswa nenzira kwayo.
Ivai vakasimba asi makadzikama alpha uye kurwisa izvo zviito zvehunhu nekurovedza muviri uye kwepfungwa, uye uve nechokwadi newe namatira kutsika . Nguva dzose chengeta yako yekudzidzira zvikamu zvine chekuita uye zvakanaka. Iwe unogona kuzviita nekushandisa kubata, mibairo, uye kurumbidza kukurudzira chero imbwa.
Iva anoenderana uye ane mwoyo murefu . Kana imbwa yako kana mbwanana yanga isingakwanise kuteedzera rairo kana akaita tsaona pane kapeti yako yaunofarira, usamboshandisa toni dzakashata kana mazwi, uye nyorova. Zvakaitika zvakashata hazvimbofi zvakabatsira.
Tarisa uye teerera kuti muridzi wembwa uyu anopa sei zvakapusa miraidzo / zvidobi apo achikurudzira Teddy nekubata uye kurumbidza.
Ngatifambirei pahutano hwakazara hweichi chinoshamisa rudzi nekuti kwete chete kuti iwe unofanirwa kufadza yako inoshamwaridzika canine pfungwa nemweya, asiwo maAussiedoodles epanyama zvinodiwa.
MaLabradoodles eAustralia ane hunhu hwakanaka, asi varidzi vembwa vane mamwe mabasa pane kungotora imbwa yavo vachifamba.
Kunze kwekugara nhaka zvinogona kuitika zvinetso zvehutano kubva kuvabereki vayo, iyo Aussie Labradoodle inouya nematanhatu matatu. Izvi zvinoreva kuti iwe uchafanirwa kutarisisa kune chaiwo madikanwa eiyo Doodle yaunotora.
Zvakareruka zvinhu sekudzivirira yako Mini Australian Labradoodle kubva kusvetuka kubva fenicha kana kukwira nekudzika masitepisi kunogona kubatsira kudzivirira matambudziko akabatana, kana kuziva kuwanda kwekumudyisa, kuti arege kufuta. Mushure mezvose, chinhu chakanakisa chaungaite kuratidza kuti unoda sei chipfuwo chako nekumuchengeta.
Kudya Kunokodzera Yakadai Iyo Inoshanda Imbwa
Imbwa dzese dzinokodzera mhando yemhando yepamusoro, mhando- uye saizi-yakakodzera kudya kuti vave nechokwadi chekuti vanogara noutano.
Saka usati wasarudza chaiyo dhayeti kana chikafu chembwa kune yako Aussie Labradoodle, bvunza vet wako kutanga kuti uve nechokwadi nezve huwandu hwechikafu uye chiyero chehutano.
Ipa yako Australian Labradoodle 2 nehafu kusvika pamakapu matatu chekudya kwembwa mazuva ese uye ripatsanure kuita zvidimbu zviviri .
Zviri kwauri kuti inguvai iwe yaunofudza imbwa yako, chero bedzi asingazowana nzara zvakanyanya uye neimwe nzira inoenderana. Zvinoitwa nevaridzi vazhinji kufudza shamwari yavo ine hura kamwe mangwanani uye kamwe manheru.
Ukasarudza chikafu chinogadzirwa pamba kana mbishi kana kunyangwe yepamusoro-yepamusoro pevanhu-giredhi imbwa chikafu , zvese zvaunofanirwa kuita kudzikisa huwandu hwechikafu chakaomeswa iwe chaunopa shamwari yako yehunhu kumudzivirira kuti asanyanya kukora.
Kana yako Labradoodle yeAustralia yakanyanyisa
Imbwa chubby inogona kutaridzika, asi iwe unenge uri kuisa hutano hwechipfuwo chako panjodzi. Kana iwe uchifunga kuti ari kufuta, unogona kukamura makapu ake ezuva nezuva maviri kusvika matatu echikafu chembwa muzvidyo zvitatu panzvimbo pezvakajairwa zviviri.
Uye zvisinei nekuti Labradoodle yako yekuAustralia inokumbira zvakadii nemaziso iwayo ane rudo, usamupe zvidimbu zvematafura uye zvekudya zvisina kudya kwevanhu.
Zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kuti umubatsire kudzikira huremu zviri kuchinja kusvika kune yakaderera mafuta asi yakakwira fiber imbwa chikafu.
Kune zvakawanda zvekudya zve canines zvinozovabatsira kurasikirwa nemapaundi vachiri kuchengeta majoini avo akagwinya sezvo kufutisa kunogona kukanganisa kufamba kwembwa yako.
Iwe unofanirwawo kunamatira ku imbwa inobata izvo zvakaderera mumakhalori. Edza kupa michero pachinzvimbo, kunge zvidimbu zvidiki zvemaapuro kana karoti.
YeAustralia Labradoodles vane huremu hwakaderera
Sezvo tine maLabradoodles eAustralia ayo anogona kudya zvakanyanya, kune dzimwe imbwa dzisina hukuru hwekuda kudya uye dzinogona kuve dzakaderera muviri. Zvinogoneka kuti Doodle yako yanga ichipisa simba rakawanda, asi ive shuwa kuti ari kudzikira uremu kwete nekuda kwechirwere chiri pasi.
Kana aine hutano kunyangwe ari mutete, unogona kubatsira pooch yako kuti iwedzere uremu. Unogona wedzera mumwe mukombe Chikafu chembwa mune chikafu chake chezuva nezuva. Saka kubva pamakapu maviri kusvika matatu, unogona kuzviita zvina uye wozvikamura kuita zvidimbu zviviri kana zvitatu pazuva.
Iwe unogona zvakare kuchinjira kune imbwa chikafu icho chakagadzirirwa zvembwanana pachinzvimbo chevakuru.
Zvinoreva kuti haufanire kupa imbwa yako mimwe makapu nekuti macalorie akawedzera akakosha kuti uve nechokwadi chekukura kwakakwana kwembwanana.
Ramba uchitarisa padhuze pane uye uye yakawanda sei yako yeAustralia Labradoodle iri kudya. Unogona kugadzirisa kuwanda kwenguva yekudya uye huwandu hwechikafu kuti uone zvinoshanda. Uye ita shuwa kuti chipfuwo chako chinowana yakawanda yekurovedza muviri.
Kuti uzive kana Doodle yako yasvika pahuremu hune hutano uye iri kuichengeta, iye anofanirwa kuwana bvunzo dzehutano mwedzi mitanhatu imwe neimwe kusvika gumi nemiviri kudzivirira kudzokera pakuve wakanyanya kuonda kana kukora.
Labradoodle yeAustralia inowanzo kuve mhando ine hutano, asi hapana munhu anogona kuona zvese zvinetswa zvehutano zvinogona kukanganisa imbwa yako yekugadzira.
Zvese isu zvatingakwanise kuita kudzidza nezveiyi kumashure kweDoodle uye nezvenyaya nyaya dzehutano dzemubereki kuti tigone kuzviziva uye netariro, kudzikisira kana kutodzivirira mikana yekuti chipfuwo chako chiwane chero chazvo.
Crossbreeds inogara nhaka matambudziko akajairika ehutano anokanganisa vabereki vavo, uye mamwe eayo anogona kuwanikwa neLabradoodle yako yeAustralia ndeaya:
Kufambira mberi Retinal Atrophy
Gokora uye Hip Dysplasia
Zvirwere zveVon Willebrand
Iwe unofanirwa zvakare kucherechedza kana yako yeAustralia Labradoodle iri kugara ichichemedza uye ichikwenya, izvo zvinogona kuve chiratidzo chekuti ane kurwara.
Chimwe chezvikonzero zvinokonzeresa kuseri kweichi ndechekuti yako Aussiedoodle inogona kunge iri yeergorgia kune chimwe chinongedzo muchikafu chake senge zviyo kana huku. Kwete chete iyo inogona kutungamira kune kutsamwa kweganda, asiwo nenyaya dzekugaya.
Iwe zvakare unofanirwa kufunga nezvezvakakosha zvinhu senge yako Doodle zera uye mamiriro ehutano . Zvinhu senge, huwandu hwechikafu chingatarisirwa nembwanana chakasiyana nekuwanda kwaunofanira kupa kumunhu mukuru weAustralia Labradoodle.
Unogona kugara uchichinjira ku hypoallergenic chikafu chembwa kana kurapa kune yako allergy-inoshamwaridzika Aussiedoodle. Izvo zvinobatsira kubata, kwete chete bhachi rake uye ganda, asi pamwe nehutano hwake hwekugaya.
Kana yako Doodle iine kubuda kweziso, kutarisirwa kwakakodzera, uye kuchenesa ndiyo yakanyanya kunaka nzira yekugadzirisa nayo. Asi kana ichiratidzika kuve yakasvibira kana chero rumwe ruvara, ita musangano neveti yako kuti uiongorore.
Shanda uye bvunza chiremba anovimbwa nachiremba kuti uchengete doodle yako iine hutano sezvaungagone uye pamwe (zvigunwe zvayambuka) yako Labradoodle yeAustralia inodarika avhareji yayo Hupenyu hunotarisirwa hwemakore gumi nematatu kusvika gumi nemashanu !
Iye zvino zvatakadzidza izvo zvakakosha kana ruzivo nezve Australian Labradoodle, ngatifambe tichienda kwaungawana imwe.
Kana mhando dzakasanganiswa dzichibatanidzwa, unofanirwa kuchera zvakadzama pese paunoita ongororo yako. Iwe unofanirwa kuve wakanyanya kuchenjera kana uchitsvaga wekubereka anoomerera kune zviyero zvevakanyoreswa uye vanozivikanwa vafudzi.
Uye kana iwe wafunga kutenga, ita shuwa kuti uri kutenga kubva kune mumwe munhu asingatore yeAustralia Labradoodle mbwanana kubva kumbwanana zvigayo.
Iwe haungade kubatanidzwa mune izvo uye netsaona uvatsigire. Uyezve, pachave nekugona kukuru kuti pakupedzisira, panogona kunge paine dambudziko nehunhu hwako hunhu-huchenjeri kana hutano hwavo.
Marii yeAustralia Labradoodle inodhura?
Litter yeAustralia yeLabradoodle yaiwanzove neavhareji yeanhu gumi nemasere, saka hadzisi idzo zvisingawanzoitika. Asi zvimwe zvezvinhu zvinokanganisa mutengo unenge uri wekubereka, dzinza, nenzvimbo.
Kazhinji, yeAustralia Labradoodle mbwanana yaizodhura yakatenderedza $ 2,700 kusvika $ 3,000 .
Nei maAustralia Labradoodles anodhura?
Haisi chete nekuti Australian Labradoodle imbwa yekugadzira, asiwo nekuda kweiyo kubereka stock .
Kana muberekesi akashandisa chizvarwa chepamusoro cheDoodle uye akaita zvakawanda kuyedza hutano kuvabereki, zvingave zvine musoro kuti iyo Aussiedoodle inodhura.
Sezvo iyo Aussiedoodle isiri yako yepakati hybrid, vafudzi vanoisa nguva yavo, kuzvipira, uye mari kutarisisa mukugadzira iyi mhando yembwa.
Uye izvo zvinoita kuti maLabradoodles eAustralia akoshe mari yako. Iwe unenge uchibhadhara a yepamusoro-mhando canine shamwari ine hunhu uye hunoshamisa hunhu.
VekuAustralia Labradoodle Vafudzi
Kana iwe uchida kutenga iyo Aussie Labradoodle puppy, unogona kutarisa iyo nhengo dzinobereka yeAustralia Labradoodle Association yeAmerica.
YeAustralia Labradoodle Kirabhu yeAmerica inokupa iwe sarudzo yekuona yavo International, US, uye Canada nhengo dzekubereka .
Kunze kweavo, heano mamwe evamwe vafudzi vepamhepo anotarisana nerudzi rweLabradoodle neAustralia Labradoodle:
Bunji yeAustralia Labradoodles (Midwest Michigan, US)
Yakakwirira Nyika yeAustralia Labradoodles (Keene, NH, US)
Lomond Makomo Labradoodles (Scotland, UK)
Kugamuchira kana Kudzosera Australian Labradoodles
Kana iwe wafunga kutora, kununura, kana kudzoreredza yeAustralia Labradoodle, isu tinotsigira iyo 100%!
Iwe hausi kuzongowana canine shamwari; urikuponesawo hupenyu hwembwa iyo.
Tarisa uone aya mawebhusaiti ayo anopa akawanda sarudzo iwe:
Shuga Pine Doodles (Amador County, California)
Daisy Chikomo Labradoodles (Maodzanyemba Oregon)
Doodle Rock Kununura (Dallas, Texas)
Takataura kuti kune masangano kana makirabhu ayo ari kushanda nesimba kuchengetedza uye kuenderera mberi nekuvandudzwa kwemitsetse yeAustralia Labradoodle, uye vachiva nechokwadi chekuti kuberekana kunoteedzerwa zvakanaka.
Iwo mapoka akakodzera kubvumwa, uye ndeaya:
LAA - Labradoodle Sangano reAustralia
IALA - Yepasi rose yeAustralia Labradoodle Association
FTAA - YeAustralia Labradoodle Kirabhu yeAmerica
HAPANA - Pasi Pose Australian Australian Labradoodle Association
ALAEU - YeAustralia Labradoodle Sangano Europe
Aya makirabhu zvakare anodzidza kuti ndeapi marudzi embwa akakodzera kubvumidzwa kuunza zvakadzama mumitsara yakasarudzwa.
Uye sezvo Australian Labradoodle iri yemasanganiswa kana imbwa yekugadzira, iyo American kirabhu kirabhu (AKC) haizive rudzi urwu, asi iyo Imbwa Registry yeAmerica Inc (DRA) inoita.
Iwe unofarira kuziva nezve mamwe maPoodle anosanganiswa kunze uko? Kuwana nekukurumidza kutarisa kwavo misiyano kubva kuAustralia Labradoodle kwaizobatsira zvikuru.
Icho zvakare chinhu chakanaka kudzidza nezve mamwe marudzi emaDoodles nekuti izvo zvinoreva kuti unenge uine dzimwe sarudzo kana uchinyatsoda rudzi rwakayambuka nePoodle.
Australia Labradoodle VS Yakajairwa Labradoodle
Imwe yemisiyano pakati pevaviri ava ndeyekuti mamwe maLabradoodles anodonhedza nepo maAustralia Labradoodles asingadaro, izvo zvinoita kuti vave sarudzo inozivikanwa kune vanhu vane chisimbwa .
Labradoodles imbwa dzakanaka dzemhuri asi dzinogona kuita bope saka munhu mukuru anofanira kutarisa kana vari padhuze nevana.
Kana musanganiswa weLabrador-Poodle ukasawana kukwana kwakaringana uye kurovedza muviri, vanogona kuvandudza nyaya dzekuzvibata senge kuhukura kana kutsenga. Australia Labradoodles vari dzikama , Haizoiti kana yabhowekana, uye nyore kudzidzisa.
Asi maLabradoodles ane rudo kwazvo uye imbwa huru dzebasa.
YeAustralia Labradoodle VS Bernedoodles
Bernedoodle puppy ( mabviro )
Kufanana neAustralia Labradoodles, Bernedoodles akadzikama uye akapfava. Asi Bernes anogona kunge akaomesa musoro panguva yehudiki hwavo, uye iwe unogona kutarisira kuti hunhu uende kana ivo vachikura.
Bernedoodles zvakare goofy uye inogadzira imbwa yemhuri yakanakisa , asi vanogona kunetseka kuchengeta nemhuri inoshingaira nekuti simba ravo rakaderera.
Izvo zvakare hazvisi zvedzimba diki uye zvinogona kuve kure nevasingazive. Kunze kweizvozvo, ivo vari nyore nyore kuenda.
YeAustralia Labradoodle VS Goldendoodles
Kana zvasvika pakutsamwa, iyo Goldendoodle yakati fananei neAustralia Labradoodle.
Hushamwari, hwemagariro, uye hune rudo, hazvishamise kuti vanoita zvakakura segwara, sevhisi, kana imbwa yekurapa. Iyo yeGolden Retriever-Poodle musanganiswa iri yakakura nevana uye zvipfuyo uye zviri nyore kudzidzisa.
Goldendoodles haizoite zvakanaka kana iwe ukaisiya yega kwenguva yakareba kana kana usingaipe zvakakwana kutarisisa.
YeAustralia Labradoodle VS Sheepadoodles
Gwai mabviro )
Iyo Hove yemakwai rudzi rwunove nyore zvakare kudzidzisa nekuti ivo vakangwara.
Vangaita zvakanaka mumhuri ine vana, asi iwe unofanirwa kutarisa.
Iyi imbwa haina kukanganwa hunhu hwayo hwekufudza uye yaizoedza kuzviita kune vavanotamba navo, uye inogona kutokanganisa!
Zvakangodaro, Sheepadoodles anofara uye anoita yakanaka yekutarisa.
Pakazara, rudzi urwu rwakakwana sezvo pamwe rwakapasa zvinhu zvese zvaunofanirwa kutsvaga kana uchitsvaga uye kusarudza imbwa: Hasha huru kana hunhu, njere , kuenderana mukuenderana , uye jasi repamusoro-soro .
Asi zvechokwadi, kuti usvike pane sarudzo, iwe unofanirwa kuyera mune zvakanaka nezvakaipa zvekuve neAustralia Labradoodle.
Iyi Doodle inokodzera dzimba zhinji uye mhuri, pamwe nevanhu vanonetseka nehutachiona - kunyangwe avo vanofarira kuwanda uye hwema mukati memisha yavo.
Mhando dzejasi dziri nani, inova iyo yemvere dzemakwai- uye nemvere dzemakwai, dzinokombamira kuita mapfundo uye kukwirisa hazvo. Saka iwe neako Aussie Labradoodle mungangoda kujairira maitiro ekutsvinda.
Uye imbwa iyi inoda huwandu hwezviitiko zvezuva nezuva - kubva pakufamba kuenda pakumhanya, uye kutsenga nekufunga. Kana iwe uchigara usipo nekuda kwebasa kana uchida kushandisa nguva yako mumba, saka uyu canine uyo anoda kuve pa-iyo-kuenda haazi ako.
Iyo yeAustralia Labradoodle musanganiswa rudzi rwakangwara uye runogona kuwana zvirinani kwauri nehunhu hwaro hwekunyengera. Asi kutanga kurovedza uye kuratidza kuti ndiani mutungamiri wepakeji acharega Doodle yako izive nzvimbo yake.
Asi pane zvese, rudzi urwu ndirwo rwakanyanya zvinyoro-nyoro pooch iwe yaunoshuvira!
Iwe unofungei nezveAustralia Labradoodle? Tizivisei zvese nezvenyaya dzenyu uye maonero maererano neAussie Labradoodles, uye kunyange kugovana mamwe matipi kana kuraira!
Nyora zvese mune zvakataurwa pazasi uye rega vamwe vadzidze kana kungo gushira pamusoro penyaya dzako dzinoyevedza peturu!
Mufudzi wechiGerman Mavara: Chizere Chinyorwa cheZvose gumi nematanhatu Anozivikanwa Ecoat Colors
12 Akanakisa Poodle Kucheka uye Hirstyle (Kubva ma1950s Kusvika Ikozvino)
mazita ane mukurumbira dema lab
vafudzi vashoma veAustralia vanokura sei
poodle uye cocker spaniel musanganiswa
mufudzi wechiDutch anotaridzika sei
imbwa ine mazino mangani pamwe chete